Lahatsary : Miely Manerana An’i Brezila Ny Hetsi-panoherana ‘Fitroarana Vinaigitra’ Mitsipaka Ny Fiakaran’ny Saran-dalana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2013 17:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, English, Dansk, 繁體中文, 简体中文, Português
Ilay hetsi-panoherana Free Fare Movement (Hetsika Saran-dalana Maimaim-poana) dia manohitra ny fiakaran'ny saran-dalana miala amin'ny 3 reais Breziliana (1.40 dolara Amerikana) ho 3.20 reais (1.50 dolara Amerikana) nanomboka nihatra tamin'ny fiandohan'ny volana Jona lasa teo. Notsenain'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny tsifotra mampihevina, bala fingotra ary entona mandatsa-dranomaso, niampy fisamborana olona an-jatony, ilay hetsi-panoherana natao tao São Paulo ny 13 Jona.
Nantsoina hoe “Fitroarana Vinaigitra” ilay hetsika taorian'ny fampiasàn'ireo mpanao hetsi-panoherana akanjo vonto vinaigitra hiarovan'izy tena amin'ny vokatry ny baomba mandatsa-dranomaso atsipin'ireo polisy. Voasambotra ilay mpanao gazety Piero Locatelli, mpanoratra ao amin'ny gazetiboky Carta Capital, naka sary ireo mpanao hetsi-panoherana ny 13 Jona noho izy nitondra vinaigitra tao anaty kitapo fibabiny, araky ny hita eto amin'ity Lahatsarin'ny YouTube eto ity.
Amin'ny ankapobeny, toy ny hoe “mpanakorontana” sy “mpanimba zavatra” ny fahitan’ ireo filazam-baovao mahazatra ny olona mpanao fihetsiketsehana, kanefa niova tsikelikely io fandrakofam-baovao io noho ny fijoroana vavolombelona nentin'ny fanaovan-gazettin'olon-tsotra izay nameno ny aterneto. Niparitaka be teny anaty tontolon'ny bilaogy ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fisian'ny famoretana feno herisetra ataon'ireo polisy. Ny bilaogy Tumblr feridosnoprotestosp.tumblr.com (izay midika hoe “naratra tao amin'ilay hetsi-panoherana”) dia natsangana mba hitoriana ny tranganà herisetra rehetra mihatra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tao amin'ny Twitter, dia tena nampiasain'ny maro tokoa ilay tenifototra #pimentavsvinagre (#peppervsvinegar). Nozaraina tao amin'ny YouTube ihany koa ny lahatsary toy ity alefan'ity mpiasa an-tsitrapo ao amin'ny Global Voices Raphael Tsavkko ity, izay mampiseho ny herisetran'ny polisy teny amin'ny lalàmben'i Augusta tao São Paulo.
Nanomboka ny 13 Jona dia niafara taminà fisamborana olona an-jatony hatrany ilay hetsika, nidina an-dalambe ny mponina avy any amin'ny faritra maro toy ny avy ao Rio de Janeiro sy Porto Alegre niatrika ny herisetran'ny polisy. Ary raha toa ka ity diabe natao tamin'ity volana ity no nahitàna famoaham-baovao nasionaly sy Iraisam-pirenena be indrindra, dia misy hifandraisany amin'ireo fitakiana iadiana amin'ny fiakaran'ny saran-dalana izay natao tamin'ny taon-dasa ihany izany.
Mafana fo maro avy amin'ny Anonymous no nibahana ilay vohikala “site of the Union of Passenger Transport Companies of the City of Natal”(SETURN), na ny vohikalan'ilay Fikambanan'ny Mpitatitra ao amin'ny Kaominin'i Natal , ilay sampana miandraikitra ny fitateram-bahoaka ao amin'ny tanàna, ary nampakatra lahatsoratra hanasàna ny mponina handray anjara amin'ilay hetsi-panoherana hatao ny 20 Jona.
Tao Porto Alegre, ilay renivohitr'i Rio Grande do Sul, nahavita nampiato ilay fanapahan-kevitra fampiakarana ny saran-dalana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe ny volana Martsa 2013. Taorian'io tsindry io, nahaton'ny Fitsarana ilay fanovàna ny volana Aprily. Na dia izany aza anefa, hisy fitsarana ihany afaka roa herinandro aorian'io, izay mety hampihatra ilay fanapahan-kevitra indray. Ny Association of Passenger Transporters (ATP)na ny Fikambanan'ny Mpitatitra vahoaka, ilay orinasa miandraikitra ny fitateram-bahoaka ao amin'ny tanana dia miandry fatratra ilay fitsarana. Ny tolo-kevitr'ilay orinasa dia ny hiakaran'ny saran-dalana ho 2.85 reais Breziliana (1.32 dolara Amerikana) ka hatramin'ny 3.05 reais (1.41 dolara Amerikana).
Voalaza fa nisy tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana no namotika fitoeram-pako sy namaky ny jironà kamiao ka dia 23 ny totalin'ireo olona voasambotra tamin'io alina io, 18 lehilahy ary 5 vehivavy, araky ny voalazan'n’ny vohikalam-baovao. Lahatsary iray nakarin'ilay mpampiasa YouTube Jeronimo Menezes no mampiseho polisy mitam-piadiana miditra tao amin'ilay trano fisotroana iray tao amin'ny João Pessoa Avenue ary nandrahona ny olona tao, mba hanerena azy ireo hanondro izay nandray anjara tamin'ilay hetsi-panoherana.
Ny omaly hariva talohan'ny fanombohan'ny Fiadiana ny Amboaran'ny kaonfederasiona, ilay hetsika atao alohan'ny Amboara eran-tany 2014 izay hatao ao Brezila, dia lasa vanja nandrehitra ny afo nanairana ny sehatra maro hafa manan-daja kokoa ilay ady amin'ny fiakaran'ny saran-dalana, araky ny fampahatsiahivan'ilay mpanao gazety Luís Felipe dos Santos azy.
Ity lahatsoratra ity dia niarahana nanoratra tamin'i Débora Baldelli.